R & D စွမ်းဆောင်ရည်
06 Lab ကပစ္စည်း
စဉ်ဆက်မပြတ်စို & Temp ကုန်သည်ကြီးများအသင်း
အမြင့် & အနိမျ့ Temp စမ်းသပ်ခြင်းကုန်သည်ကြီးများအသင်း
Electro- အပူ Incubator
160L ရေဂျာကင်အင်္ကျီဓာတ်ခွဲခန်း CO2 တင်နေတာစျေးနှုန်း
4 စည်စတင်ယိုဖိတ်မှုကွန်တိန်နာ Pallet
hot ရောင်းရန်အကြီးစားအလိုအလျောက် 1584 ကြက်သားဥ Incubator
မြင့်အနိမျ့အပူချိန်စိုပတ်ဝန်းကျင်စမ်းသပ်ခြင်းကို C ...
Jiangsu, တရုတ် (ပြည်မကြီး),
လစိုပတ်ဝန်းကျင်စမ်းသပ်ခြင်းကုန်သည်ကြီးများအသင်းနှုန်း 50 Piece / ပိုငျးပိုငျး
ငွေပေးချေမှုပြီးနောက် 15 ရက်အတွင်းတင်ပို့
* 1440 730 * 880
≤± 0.5 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
≤±2° C မှ
-20 ~ + 150 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
သက်ဆိုင် တူရိယာများနှင့်မီတာ, အီလက်ထရောနစ်ဓာတုပစ္စည်းအားလပ်ချိန်မှာအစိတ်အပိုင်းများ
အပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆပတ်ဝန်းကျင်စမ်းသပ်မှုများအလိုက်အထိုက်နေတတ် Coating ။
မြင့်အနိမျ့အပူချိန်စို Thermal Shock စမ်းသပ်ခြင်းကုန်သည်ကြီးများအသင်း လက်ခဏာ
အမြင်အာရုံ display ကိုထိန်းချုပ်တင်သွင်းဒစ်ဂျစ်တယ် display ကိုအပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်မီတာ, အစိုဓာတ်ကို, အပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆချမှတ်။
အဆိုပါအလုပ်လုပ်ကိုင်အခန်းထဲကအပူလျှပ်ကာအလွှာကိုပက်ဖြန်းခြင်းနှင့်အကျိုးရှိစွာ electrostatic ပလပ်စတစ် Shell, အရည်အသွေးမြင့် 304 သံမဏိမှန်ပန်းကန်၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ရေနွေးငွေ့ဇချမှတ် အလိုအလျောက်ဖြည့်ရေလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ umidifying နည်းလမ်း, အော်တိုရေစောင်ရေကွင်းဆက်။
တံခါးကိုစမ်းသပ်မှုနမူနာများ၏စမ်းသပ် status ကိုစောငျ့ရှောကျနိုငျသညျ, ကြီးမားတဲ့မြင်ကွင်းင်းဒိုးမိုးလုံလေလုံအလင်းရောင် installation ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။
cable ကိုစမ်းသပ်မှုအပေါက်, စမ်းသပ်မှုများအတွက်လျှပ်စစ်မီးစမ်းသပ်မှုနမူနာ Install လုပ်ပါ။
အပူချိန်, ရေပြတ်လပ်မှု, ထိုကဲ့သို့သောလုံခြုံရေးအဖြစ်ယိုစိမ့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး device ကိုကျော်ရှိသည်။
မော်ဒယ်နံပါတ် အတွင်းစိတ် Size ကို (မီလီမီတာ) OuterSize (မီလီမီတာ) အပူချိန် Range စွမ်းအား
GDC4010 500 * 450 * 500 * 1560 980 * 830 -20 ~ 150 ℃ 3500W
GDC6005 400 * 350 * 400 * 1460 920 * 750 -40 ~ 150 ℃ 4000W
GDC6010 500 * 450 * 500 * 850 * 1660 1020 -40 ~ 150 ℃ 4500W
GDC8010 * 1000 * 1000 1000 * 1450 * 2310 1520 -65 ~ 150 ℃ 8500W
စိုထိုင်းဆပတ်ဝန်းကျင်စမ်းသပ်ခြင်းကုန်သည်ကြီးများအသင်း Related ကုန်ပစ္စည်း
စိုထိုင်းဆပတ်ဝန်းကျင်စမ်းသပ်ခြင်းကုန်သည်ကြီးများအသင်း ထုပ်ပိုး & သင်္ဘော
ထုပ်ပိုး: polywood ကိစ္စတွင်။
Delivery: 15 ရက်အတွင်း။
ကျနော်တို့ 2004 ခုနှစ်တစ်နှစ်အတွင်းစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့ကြသည်ကတည်းကကျနော်တို့ကအမြဲကောင်းတစ်ဦးကော်ပိုရိတ်စနစ်ကထူထောင်ဘို့အလုပ်အကိုင်နှင့်အရည်အသွေး "၏စိတ်ကူးမှလိုက်နာရန်။ "
Yo ur အောင်မြင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ "ပထမဦးဆုံးပထမဦးဆုံးအသုံးပြုသူများအရညျအသှေး" ၏မူဝါဒရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့နွေးနွေးထွေးထွေးကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အားလုံးဖက်အိမ်နှင့်ပြည်ပမှာကြိုဆိုပါတယ်.
PayPal ကအနောက်သမဂ္ဂ, T / T (ကြိုတင်မဲအတွက် 100% ငွေပေးချေ။ )
ရရှိနိုင်ပါသည်ဘယ်တင်ပို့ 3. ?
သငျသညျတင်ပို့ပြီဘယ်တိုင်းပြည် 4. ?
ကျနော်တို့မလေးရှား, ဗီယက်နမ်, ထိုင်း, အမေရိကန်, ပြင်သစ်, စပိန်, မက္ကစီကို, ဒူဘိုင်း, ဂျပန်, ကိုရီးယား, ဂျာမနီ, Porland စတာတွေလိုပဲအားလုံးအများဆုံးလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှပတ်လည်နိုင်ငံအများအပြားတင်ပို့ခဲ့
အဆိုပါပေးပို့အချိန် 5. ဘယ်လောက်ကြာကြာပါသလဲ
အဲဒီအကြောင်း 5-15 ရက်အတွင်းပါပဲ။
ယခင်: Lab ကအပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆတင်နေတာဏု
နောက်တစ်ခု: hot ရောင်းရန်အကြီးစားအလိုအလျောက် 1584 ကြက်သားဥ Incubator
12 PCs အိမ်ထောင်စုဟာ့ဒ်ဝဲအိမ်ထောင်စုလက် Tool ကိုသတ်မှတ်မည်
ချိန်ညှိ Humidistat ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်စက်မှု Deh ...
58 ပိုငျးပိုငျး Multi Function ကိုလက် Tool ကို Kit သတ်မှတ်မည်
ဓာတ်ခွဲခန်းကိုအသုံးပြုခြင်းဓာတုဓာတ်ခွဲခန်း Flammable Sa ...
ချိန်ညှိ Headband အသံသက်သေပြချက်ကလေးများ Earmuff Sa ...
ဓာတ်ခွဲခန်း Dryin ပျံ့နှံ့နေတဲ့စက်မှု Hot Air ကို ...
နေရပ်လိပ်စာ: 268, တောင် Wangshan လမ်း, Kunshan, Jiangsu ပြည်နယ်, PRChina
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-512-57759270
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်. မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များအဘို့, မည်သည့်အချိန်တွင်ကျွန်တော်တို့ကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်ပါနဲ့ကျနော်တို့ 24 နာရီအတွင်းအဆက်အသွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
မစ္စတာသီချင်း Jin က